ANDIANA MPANENDAKA AO MAHAJANGA : Lehilahy iray indray no lasibatra
Ny alin’ny alarobia teo dia lehilahy iray hamonjy fodiana no lasibatry ny mpanendaka. Nandeha môtô izy, ary teo amin’ny Makiloc Tsaramandroso no nosakanan’ireto olon-dratsy. 15 décembre 2017
Nambanan’izy ireo tamin’ny antsy ilay tovolahy ary nentin’izy ireo nitsoaka ilay môtô. Teny amin’ny Galana Manjarisoa anefa dia nidofotra ilay kodiaran-droa, nentin’ireo jiolahy nitsoaka.
Nosamborin’ny polisy ao amin’ny Uir (Unité d’intervention rapide) ny iray tamin’ireo dimy lahy mpanendaka. Tsy ampy taona izy io. Naverina tamin’ny tompony kosa ilay môtô, izay efa potika nandritry ny loza. Mitady hahazo vahana eto Mahajanga indray ny asa fanendahana. Nihombo izy io tamin’ny fiantombohan’ny volana desambra teo no mankaty. Saika isanandro dia misy hatrany ny trangana fanendahana ary voalaza fa andiana zatovo hatrany ireo manao asa ratsy.
Ankoatr’ireo faritra mena toy ny eny Tsararano, Mahavoky avaratra sy Aranta dia efa betsaka ihany koa ny fokontany anaovan’ireo zatovo ny asa ratsiny :
Tsaramandroso eo amin’ny Pont blanc mandalo amin’ny Gastro pizza ka hatreny amin’ny Shoprite. Eny Makiloc Mahabibokely, bazary Mahabibo mandalo ny jardin cayla ka hatreny amin’ny pont Fitim, manodidina ny gymnase couvert hatreny amin’ny Bonnet.
Mahafantatra azy ireo ny eny amin’ny fokontany ary efa matetika manao fitarainana saingy tsy mbola misy fiaraha-miasa matotra amin’ny fokontany sy ny mpitandro filaminana hamongorana ireo mpanao ratsy ireo. Ilaina ihany koa ny fandraisana andraikitra matotra eo amin’ny mpitsara sy ny mpiandry fonja satria ny voasambotra omaly ihany no samborina rahampitso ary mitohy hatrany ny asa ratsy.